FBC - Maqaa invastimantiitin qaxxaamuraan duroomuuf kan socho’an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira- Preezdaant Lammaa
Maqaa invastimantiitin qaxxaamuraan duroomuuf kan socho’an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira- Preezdaant Lammaa
Finfinnee, Ebila 12,2009(FBC) –Mootummaan naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa waliin magaalaa Finfinnee galma jiddu gala aadaa Oromootti mari’ate.
Waltajjii kanarratti hudhaaleen invastimantii, rakkoowwan gama mootummaa, abbootii qabeenyaa fi furmaanni isaanii dhimmoota marii turan.
Hirmaattonni waltajjichaas waliin ga’iinsi bu’uraalee misoomaa bal’aan akka jiru fi rakkoon bulchiinsa gaarii damichaas heddu ta’uu kaasaniiru.
Gama mootummaatiin ammoo rakkoo kana maqsuuf maaltu yaadame gaaffiin jedhu dhiyaatee deebiin itti laatameera.
Pireezdaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lamaa Magarsaan deebii kennaniin, rakkoo bu’uraalee misoomaa maqsuuf mootummaan hojiilee heddu hojjetus, feedhiin yeroo ammaa jiru daran dabalaa dhufuu isaatin wal simsiisuun akka hin danda’amne himan.
Gara fuula duraatti garuu rakkoo kana furuuf abbootii qabeenyaa waliin ta’uun hojjechaa jira jedhaniiru.
Guddina biyyattii itti fufsiisuuf gaheen invastimantii olaanaa akka ta’e kan himan obbo Lammaan, abbootii qabeenyaa seeraan hojjetaniif gama mootummaatiin deeggarsi walirraa hin cinne ni taasifamas jedhan.
Maqaa invastimantiitiin qaxxaamuraan duroomuuf lafa bal’aa qabatanii kan taa’an ammoo adda baasuun seeraf dhiyeessuun jalqabameera jedhaniiru.
Rakkoowwan gama mootummaatin jirus ariitidhaan hiikaa deemuun abbootiin qabeenyaa invastimantii garaa garaa keessatti hirmaachuuf feedhan rakkoo malee gara hojiitti akka galan hojimaanni haaraan akka diriiraa jiru obbo Lammaan himaniiru.
Marii kanarratti sadarkaa itti aanaa preezidaantiitti hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii obbo Abiy Ahimad barreeffama Oromiyaan carraa invastimantiin qabdurratti hirmaattotaaf dhiyeessaniiru.
Maricharratti abbootiin qabeenyaa hojii invastimantii magaalaa fi baadiyyaarratti bobba’an 1000 ol ta’an kan argaman yammuu ta’u, hojii kana karaa iftoomina qabuun hoogganuun akka danda’amu karoora tarsiimawaa (strategic road map) fi wixinee hammattoo seeraa qopheessun kan xumurame yoo ta'u, wixineen hammattoo seeraa qophaa'es qaama dhimmi ilaallatuun mirkanaa'ee hojiitti kan hiikamu ta'a jedheera koominiikeeshiniin naannichaa.
Oduuwwan Biroo « Naannichi abbootii qabeenyaa waliin mari’achaa jira	Ityoophiyaa fi Keeniyaan yaa’ii Beejiingirratti hirmaachufi »